Vanogadzira Stud | China Stud Vatengi, Fekitori
Yakakwirira simba mhete
Iyo yakasimba-yakasimba sitira inoshandiswa kugadzirisa uye kubatanidza basa remuchina unobatanidza. Ose maviri magumo eiyo stud ane tambo, uye yepakati sikuruu ine gobvu uye yakatetepa iyo. Inodaidzwa yakananga tsvimbo / shrink tsvimbo, inonziwo mbiri-musoro sikuruu. Inowanzo shandiswa mumigodhi michini, mabhiriji, mota, midhudhudhu, zvidhina zvakagadzirwa nesimbi, mapyloni, akareba-masimbi esimbi zvivakwa uye zvivakwa zvakakura.
Hot Dip kwakakurudzira mhete
Hot-dip kwakakurudzira mhete inoshandiswa kugadzirisa uye kubatanidza basa rekubatanidza michini. Ose maviri magumo eiyo stud ane tambo, uye yepakati sikuruu ine gobvu uye yakatetepa iyo. Inodaidzwa yakananga tsvimbo / shrink tsvimbo, inonziwo yakapetwa-misoro sikuru. Inowanzo shandiswa mumigodhi michini, mabhiriji, mota, midhudhudhu, zvidhina zvakagadzirwa nesimbi, mapyloni, akareba-masimbi esimbi zvivakwa uye zvivakwa zvakakura. Mushure mekupisa kwekusimudzira kwepamusoro kurapwa, antirust athari inowanikwa.